Gorfeyn:- Xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya kadib booqashadii madaxweyne Farmaajo ee Addis Ababa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gorfeyn:- Xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya kadib booqashadii madaxweyne Farmaajo ee Addis Ababa
Safarkii madaxweyne Farmaajo uu dhawaan ku tagay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa ahaa mid ay si weyn isha ugu hayeen shacabka Soomaaliyeed, iyadoona soo dhaweyntii loo sameeyay madaxweynaha ay ahayd mid aan hore loogu sameyn madax ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa markii uu dhawaan gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa loo soo dhaweeyay sida loo soo dhaweeyo madaxda sare ee caalamka.
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn iyo mas’uuliyiin kale oo dowladiisa ka tirsan ayaa soo dhaweyn aan hore loo arag u sameeyay madaxweyne Farmaajo, kadib markii uu kasoo degay garoonka magaalada Addis Ababa.
Soo dhaweyntaasi ayaa waxay shacabka soomaaliyeed xasuusinaysaa maah-maahdii ahayd “Lax Kasta Meeshii Ay Is Dhigto Ayaa Lagu Gowracaa” taas oo daliil u ah sida ay dowladda Itoobiya ula dhaqantay madaxweyne Farmaajo, kadib markii xilka loo doortay.
Inkastoo xiriirka labada dal uu muddooyinkii dambe sii xumaanayay ayaa hadane soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo ee Addis Ababa ayaa la oran karaa waa mid kor usii qaadeysa sharafta iyo jiritaanka Soomaaliya islamarkaana isku soo dhaweynaysa xaga diblomaasiyadda ee labada dal.
Hadaba muxuu madaxweyne Farmaajo safarkiisa kasoo faa’iday.
Safarka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Addis Ababa waxaa la oran karaa wuxuu kasoo faa’iday labo arrin oo aad u muhiimsan oo hore mugdi ku jiray, waxaana labadaasi arrimood ka mid ah:-
– In wixii hadda ka dambeeya dowladda Itoobiya ay madaxda Soomaalida ula dhaqanto sida madax iyaga la siman oo kale, islamarkaana matalaya dal xur ah oo madax banaan, waxaana taasi daliil u ah soo dhaweyntii iyo balan-qaadkii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo.
– In hadii dowladda Itoobiya ay damacdo inay xiriir la sameeyso maamul goboleedyadda dalka ka jira inay usoo marto dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo ah dowladda kaliya ee Qaranimada Soomaaliya matasha.
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa khudbad uu dhawaan jeediyay sheegay in madax banaanidda Soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah islamarkaana ay dowladda Soomaaliyeed xur u tahay dalkeeda.
Inta badan shacabka Soomaalieed ayaa shaki ka qaba in ballan-qaadka dowladda Itoobiya uusan u fullin sida uu ka dhawaajiyay ra’iisul wasaarahooda, balse soo dhaweyntii magaalada Addis Ababa loogu sameeyay madaxweyne Farmaajo ayaa waxay muujineysaa in dowladda Itoobiya ay kasoo dabacday fikradihii qaldanaa ay hore uga haysatay Soomaaliya.